मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी दर्ता विधेयक प्रेसमाथिको 'कू', फिर्ता गराउँछौं : देउवा
12th May 2019, 05:08 pm | २९ बैशाख २०७६
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा दर्ता भएको नेपाली मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको 'कू' भएको बताएका छन्।
आज कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध आउने विधेयकको कांग्रेसले डटेर विरोध गर्ने जनाए।
उनले भने, 'यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको 'कू' हो। संविधानसम्मत पनि आएको छैन। हामी पार्लियामेन्ट र बाहिर सडकमा पनि विरोध गर्छौ। यो विधेयक विथड्र नै गर्छौ।'
स्वतन्त्रता, न्याय र समानता कांग्रेसको आदर्श भएको उल्लेख गर्दै देउवाले प्रेस स्वतन्त्रताबिनाको लोकतन्त्र कल्पना गर्न नसकिने बताए।
'जय नेपाल' नभने 'जय भारत' भन्ने त?
पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नियमित पत्रकार भेटघाटका क्रममा 'मेरो सरकार' शब्द हटाउने हो भने 'जय नेपाल' पनि हटाउने होला नि भनेको विषयमा पनि प्रश्न सोधिएको थियो। जवाफमा देउवाले प्रतिप्रश्न गरे, 'आफ्नो देशको जय गर्न नपाउने? के भारतको जय भन्ने? चीनको जय भन्ने?'
प्रेस काउन्सिल मन्त्रालयको लाचार छाया बन्ने देखियो
पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रेस काउन्सिल सञ्चार मन्त्रालयको लाचार छाया बन्ने देखिएको धारणा राखे।
सुरुवाती वर्षमै प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रहार शुरु गरेको सरकारले दोस्रो वर्षमा टेक्दै गर्दा यसमा निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै शर्माले भने, 'विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध छ। प्रेस काउन्सिल न्यायको बन्धक बन्ने देखिन्छ। काउन्सिल मन्त्रालयको लाचार छायाँ बन्ने देखिन्छ।'
प्रवक्ता शर्माले सरोकारवाला पक्षसँग छलफलै नगरी ल्याएको विधेयकले सरकार अधिनायकवादी बाटोमा हिँडेको प्रस्ट भएको दाबी गरे। भने, 'समाचार लेख्दै गर्दा लाखौं तिर्नुपर्ने भय हुन्छ भने कसरी समाचार लेख्ने? प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेर कस्तो लोकतन्त्र ल्याउन खोजेको सरोकारवाला संस्था सँग छलफल नगरी बढ्दा अधिनायकवादी देखियो।'
पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्ति यस्तो छ
१. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ । यसको सुस्पष्ट अर्थ हो नेपालको प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढंगले असर पु¥याउन पाइन्न । सरकारद्वारा २६ बैशाखमा संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शव्द, भावना र मर्मंको प्रतिकुल छ।
५. समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट कहिल्यै पनि र कुनै पनि त्रुटी हुनेछैन भनेर अलौकिक परिकल्पना गर्न सकिन्न । त्यस्तो त्रुटी हुँदा प्रेस काउन्सिलले निश्चित विधि, प्रक्रिया र आचारसंहिताको हेक्का गराउँदै आएकै थियो र अर्धन्यायीक हैसियतसाथ न्यायोचित समन्वयनको अभ्यास र प्रयत्न गरिआएको थियो । तर, विधेयकले सोझै भारी अंकको जरिवना तय गर्नु न्यायोचित विलकुलै छैन नै काउन्सिलको विश्वव्यापी स्थापित परम्परा भन्दा विल्कुलै विपरित पनि छ ।
८. प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकहरुका विरुद्धमा संसदमा नेपाली कांग्रेस प्रखर ढंगले उभिनेछ।